Izindaba - SUNTOP ngokunemba okuphezulu usayizi omncane wokusika we-fiber laser cutting machine eJalimane
Umshini wethu wokusika we-CNC we-laser we-high-precision walethwa ngempumelelo eJalimane. Ikhasimende linikeze ikakhulukazi izinsizakalo zokucubungula izinsimbi futhi zidinga ukucacisa okungu-0.08mm. Ekuqaleni, wakhetha abahlinzeki abaningi, ngemuva kokuqhathanisa ukucushwa komshini, ukunemba, ubuchwepheshe kanye nomsebenzi womshini, i-SUNTOP Laser ekugcineni iyakhethwa. Lapha, sifisela ibhizinisi lakhe kangcono futhi elingcono. ISUNTOP izoqhubeka nokusebenza kanzima futhi ngeke ikudumaze.
Ngokuya ngemininingwane yakamuva ekhishwe yiGeneral Administration of Custom, ukungeniswa nokuthengiswa kwamanye amazwe kweChina kufinyelele ku-2.84 trillion yuan ngo-Okthoba, ukwanda ngo-4.6% esikhathini esifanayo ngonyaka odlule (okufanayo ngezansi). Lokhu futhi kukhula okuhle kwenani lokungenisa nokuhweba kwamanye amazwe izinyanga ezinhlanu zilandelana kusukela ngoJuni. Phakathi kwabo, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwakungu-1.62 trillion yuan, ukwanda okungu-7.6%; ukungeniswa kwempahla kwakungu-1.22 trillion yuan, ukwanda ngo-0.9%; Insalela yokuhweba yayiyi-yuan eyizigidigidi ezingama-401.75, ukwanda ngo-34.9%. Ukuhlaziywa kukhombisa ukuthi izici ezinhle ekhaya nakwamanye amazwe zisanqwabelana, futhi ukuhwebelana kwamanye amazwe kulindeleke ukuthi kugcine ukukhula okuqhubekayo konyaka wonke.
Kukonke, ezinyangeni eziyishumi zokuqala zalo nyaka, inani eliphelele lokungeniswa nokuthunyelwa kwempahla ezweni lase China lalingama-yuan angama-25.95 trillion, okuwukukhuphuka kuka-1.1%. Phakathi kwabo, ukuthunyelwa kwamanye amazwe bekuyi-yuan eyi-14.33 trillion yuan, ukwanda ngo-2.4%; ukungeniswa kwempahla kwakungu-11.62 trillion yuan, kwehla ngo-0.5%; Insalela yokuhweba ibiyi-yuan engu-2.71 trillion, ukwanda ngo-16.9%.
Ngenkathi kugcinwa ukukhula okungaguquki esikalini, isakhiwo sezohwebo saseChina senziwe ngcono, ngokungenisa nokuhweba okuthe xaxa jikelele kukhuphuka futhi inani landa. Ezinyangeni eziyishumi zokuqala, ukungenisa kanye nokuthumela okuthe xaxa kweChina kufinyelele ku-15.6 trillion yuan, ukwanda ngo-2.8%, okubalwa ngama-60.1% wenani lonke lokuhweba langaphandle laseChina, ukwanda kwephesenti eli-1 esikhathini esifanayo ngonyaka odlule. Phakathi kwabo, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kufinyelele ku-8.51 trillion yuan, ukwanda ngo-4.8%; ukungenisa kwempahla kufinyelele kuma-yuan ayi-7.09, ukwanda ngo-0.5%. Esikhathini esifanayo, ukungeniswa nokuthunyelwa ngaphandle kokuqhutshwa kokuhweba kufinyelele kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-6.09, kwehla ngo-6.2%.
Ukuhlaziywa kukhombisa ukuthi ukuvuselelwa okusheshayo kokuthengiswa okuthe xaxa kwezentengiselwano jikelele kunikeza umfutho wokwenziwa kahle kohlaka lonke lwezohwebo. UWang Han, isazi sezomnotho esiyinhloko seSociete Generale Securities, uthe kusukela ngoMashi, ngenqubo yokubuyiselwa kweChina emazweni angaphandle, amandla okutakula ikakhulukazi avela ekuthengisweni kwamanye amazwe okujwayelekile. Izinga lokukhula konyaka nonyaka lokuthengiswa okuthe xaxa okuthekelwayo selibuyile lafika kuma-16.8% lisuka endaweni ephansi ye- - 4.5% ngoMashi kuya ku-Okthoba; kusukela ngoJanuwari kuya ku-Okthoba, izinga lokukhula eliqoqekayo lokuhweba jikelele selibuyiselwe ku-2.8%, okubalwa cishe ngama-60% okuthunyelwa kwamanye amazwe e-China, ukwanda cishe kwe-1% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Esikhathini esifanayo, ukuhweba kokuqoqwa kokungeniswa okuqoqiwe kwaba ngu - 7.5% unyaka nonyaka, kanti ukuhweba kokungena okungenayo kwakungu - 14.7% unyaka nonyaka. Ohlelweni lokutakula okuthekelisa ngaphandle kwalolu bhubhane, ukuhweba okujwayelekile okunenani eliphakeme elengeziwe kuzolulama kangcono futhi nohwebo lweChina luzothuthukiswa.
Pipe Fibre Laser umsiki, Umsiki we-Tube Laser, Umshini wokusika we-Tube Laser, Umshini Wokusika we-China Fibre Laser, Umshini Wokusika i-Fiber Laser, Umshini Wokusika i-Fiber Laser Pipe,